TorqueScan (torque OBD Plugin ကို) | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဆက်သွယ်ရေး Apps ကပ » TorqueScan (torque OBD Plugin ကို)
TorqueScan (torque OBD Plugin ကို) APK ကို
ဤသည် torque မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်အဖြစ်အချို့သော OBD ဒီဘာဂင်များအတွက်အသုံးဝင်သောတွေ့ပါစေခြင်းငှါအချို့နဲ့အခြား features တွေသမျှသောဒေတာများပြသသော torque Pro OBD2 လျှောက်လွှာတွေအတွက် plugin ကိုဖြစ်ပါတယ်။
မရရှိနိုင်, ECU အာရုံခံကိရိယာ၏ * လျင်မြန်စွာလွယ်ကူ display ကို
လျင်မြန်စွာတိုးချဲ့ PIDs map နှင့်နေရာချထားရန် * OBD PID ကင်နာ
အဆိုပါ adapter တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုဝေးပိုမိုလွယ်ကူဒီဘာဂင် (developer များရည်ရွယ်) ခွင့်ပြုပါရန်ခွင့်ပြု * ရိုးရှင်းသော Telnet ကို server ကို
အဓိကလျှောက်လွှာ - torque - သင်သည်သင်၏ကားများအင်ဂျင်စီမံခန့်ခွဲမှုရန်သင့် android device ကိုချိတ်ဆက်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအာရုံခံကိရိယာကိုဖတ်တောင်မှအမှား codes တွေကို (DTC) retrieve နှင့်တစ်ချိန်က fixed သူတို့ကိုရှင်းလင်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာတွစ်တာမှ post ဒေတာ log, themes များထောက်ခံပါတယ်, ဒါကြောင့်အများကြီးပိုနိုင်သည်!
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် plugin ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲစိတ်ဝင်စားလျှင်သင် (AIDL ကိုအသုံးပြုသည်) ကိုဒီနေရာမှာဥပမာတစ်ခု app ကိုရှာတှေ့နိုငျ: http://ian-hawkins.com/torquescan.zip
အဆိုပါ torque ဖိုရမ်များ join နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့ (အောက်တွင်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူ link ကို click နှိပ်ပြီး) သို့မဟုတ်မေးခွန်းများကိုမေးရန်!
မှတ်ချက်: ဒီ plugin ကို torque ရဲ့အပြည့်အဝဗားရှင်းလိုအပ်ပါတယ်
သင်ဤ plugin ကိုသုံးစွဲဖို့ Pro ကို torque လိုအပ်ပါတယ်သတိရပါ!
အခုတော့ပြပွဲ (တစ်ဦးချင်းစီဆလင်ဒါဘဏ်အဘို့အ 10 ECUs နှင့်အတူဥပမာ V2 အင်ဂျင်) setup ကိုထပ် PIDs ရန်သင့်သောသူတို့အား ECUs ရယူခွင့်အလုပ်လုပ်တဲ့တောင်းဆိုမှုများကိုသုံးပြီးတဲ့အခါမှာအခြားအ ECUs ထံမှတုံ့ပြန်မှုတွေ့ရှိ
နောက်တစ်နေ့ update ကို (နှေးကွေး / ရပ်တန့်သွားပါ) မှတ်ဉာဏ်ထဲက run ပိုမိုအသုံးဝင်နှင့်မဖြစ်ဖို့က PID ကင်နာအပျေါမှာတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်
TorqueScan (torque OBD Plugin ကို)
မှ Ian Hawkins က
ကားတစ်စီး Scanner ELM OBD2
အဘို့အ FTP ကို ​​Plugin ကို ...
Yatse SMS ကို Plugin ကို